ကျနော်တို့အတွက်၊သူတို့အတွက် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ???? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကျနော်တို့အတွက်၊သူတို့အတွက် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ????
ကျနော်တို့အတွက်၊သူတို့အတွက် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ????
Posted by မောင်ရိုး on Nov 11, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 32 comments
မကြာသေးမှီကပဲ ခရီးတစ်ခုထွက်ဖြစ်ပါတယ် ။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ နယ်ဘက်ကို ဆိုပါတော့ ။ သွားရင်း လာရင်း
တွေ့ ကြုံခဲ့တာတွေရယ် တွေးမိတဲ့ အတွေးတွေရယ် ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ သတိယတာတွေရယ် ကို နဲနဲ
လောက်တော့  မောင်းထု ပါရစေ …….။
ကျနော် အခုပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေ ၊ ဖြစ်ရပ်တွေဟာ မြို့ ပေါ်နေ ပညာတတ် လူတတ်တန်းစားနဲ့ အထက်
လူတွေနဲ့တော့ သိပ်ပြီးမသက်ဆိုင်လှပါဘူး ။ သို့သော် လည်း …….မြန်မာပြည်ရဲ့  ဆင်းရဲသားအောက်ခြေ
လူတန်းစား များစွာနဲ့တော့ အထူးသက်ဆိုင်လှပါတယ် ……။ ရန်ကုန်မြို့ ဧရိယာ မှာ (၇)သန်း ခန့် နေထိုင်
ကြတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ် ။ အတိအကျတော့ မဟုတ်ဘူးးပေါ့  ….အဲဒီထဲမှာလည်း ငွေကြေးတတ်နိုင် ၊
အသိညဏ်ရှိ ၊ အတွေးအခေါ်ကောင်း ၊ ဗဟုသူတများ တဲ့သူတွေကတော့ လက်တစ်ဆုပ်စာလောက် ပါ ။
အများစုကလည်း လက်လုပ်လက်စား ၊ မရှိမရှား ၊ နဲ့ တွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်သူ နည်းပါလိမ့် မယ် ။
ဒီလိုပါ……… ကျနော် ခရီးမထွက်ခင်က ရွာပြင်ကပဲဖတ်သွားနိုင်တဲ့ အန်ကယ်ကြီးရဲ့  ၀မ်းတီး၊ တူးတီး
ပို့စ်မှာ ဆီကိစ္စကို တင်ပြထားပါတယ် ။ ဒါကိုဖတ်ပြီး ……နယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွေ
ရွာတွေရဲ့  အခြေအနေကိုတွေ့ တော့  ပြန်သတိယပြီး ကျနော်စပ်စုပါတော့တယ် ။ အဲဒီမှာ ဘာတွေသိ
လာရသလဲဆိုတော့ အချက်အလက်တွေ ….တွေးစရာတွေ …. စိတ်ပျက်စရာတွေ အများကြီး တွေ့ မြင်
ပထမဆုံး …..လူတွေ မသုံးမဖြစ် တဲ့ ဆီ ကိစ္စကိုပြောကြပါစို့ ။ မြန်မာ့ ရိုးရာ ဟင်းတွေဟာ အထိုက်အလျောက်
ဆီကိုသုံးစွဲရပါတယ် ။ ဒီတော့  ….အများစုသုံးတာ စားအုံးဆီပေါ့  ။ ဟုတ်ပါပြီ …စားအုံးဆီကို သက်သာလို့
ပဲ သုံးသုံး ၊ ဆိုးကျိုးမသိလို့  …ဂရုမစိုက်လို့ ပဲသုံးသုံး အထူးပြောစရာမရှိပါဘူး …..။သူတို့ မှမသိတာပဲကိုး…..။
သိအောင် ပညာပေးကြပေါ့  … အဲ….ဒါပေမဲ့ ….အန်ကယ်ကြီးပြောသလို အခြားဟာတွေ ချွေတာပြီး ဆီသန့် 
ပဲဆီ နှမ်းဆီ လေးများကို ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့  သုံးတဲ့သူတွေကို ကလိန်ကျတာကတော့ …
ပြောမှဖြစ်တော့မယ် ထင်တယ်နော် ……။
နယ်မှာ ၀ယ်သုံးရတဲ့ စားအုံးဆီဈေးက (၁၈၀၀) လောက်ကနေ (၂၅၀၀) အတွင်းဆိုပါတော့ ….။ ပဲဆီသန့် 
လို့ပြောတဲ့ ထူးထူးရှယ် ဆီဈေးက (၄၅၀၀)ခန့် ကနေ (၅၀၀၀) ခန့်  ပါ ….။ဈေး အများကြီးကွာပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ အများသိတဲ့အတိုင်းပဲ စားအုံးဆီနဲ့ ပဲဆီ ကို ရောကြပါတယ် ။ ပထမဆုံး ဆီစက်က လစ်ရင်
လစ်သလို ရောပါတယ် ။ (ဆီ စက်တိုင်း မဟုတ်သော်လည်း အများစုက ရောပါတယ်) ။ အဲဒီ ရောပြီးသား
ဆီကို လက္ကား ဆိုင်ကြီးများက မရောရ ရင် နူမှာစိုးလို့လားမသိ ….ထပ်ရောပါတယ် ။ ဟုတ်ပါပြီ ….ကုန်စုံဆိုင်
တွေရောက်တော့လည်း …..ထုံးစံမပျက် ထပ်ရောပါတယ် ……။ ကျနော်တို့ စားလိုက်တာ ပဲဆီ သန့် ဆိုပြီး
ဈေးကြီးကြီးပေး ……အမြင်ကပ်ခံ ပြီး ခန့် ခန့် ကြီးစားလိုက်တာ ….။ ခုတော့ ……..???????!!!!!!!!!!!
ဒီလိုသာဆို အစကတည်းက စားအုံးဆီသာ ၀ယ်စားလိုက်ရုံ ရှိတော့တာပေါ့  ………..။
ကဲ ….ဘာတွေရောသလဲ ကြည့် ကြရအောင် ……..။ မဆလ ခေတ်က အများစုက နေကြာဆီ ရောတတ်
ကြပါတယ် ။ ယုတ်မာ တဲ့သူတစ်ချို့ က ၀ါဆီ ရောတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ် ။ ထားပါလေ….နေကြာဆီကို
ရောကြတာ ပုံမှန်ပါ ။ ပြီးတော့ …၀က်ဆီ ရောကြပါတယ် …..။အခုရော…. ဘာတွေရောသလဲ ဆိုရင်
၀က်ဆီ ကတော့ လက်ရှိဈေးအရ စားအုံးဆီလောက် မကိုက်တာရယ် …..လိုသလောက်မရနိုင်တာရယ်
ကြောင့်  သိပ်မရောကြတော့ပါဘူး ။ နယ်က ၀က်ဆီ ချက်ပြီးရောင်းတဲ့သူတွေကို မေးကြည့် တာကတော့
အကြော် ဆိုင်တွေကိုပဲ ပို့ရတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ၀က်ဆီနဲ့ ကြော်တဲ့ အကြော်က ပိုပြီး ရွတယ် ၊
ကြွတ်တယ် လို့ဆိုပါတယ် ။ အထူးသဖြင့်  ပဲကြမ်း ကြော် ၊ နှစ်ပြန်ကြော်များဟာ ၀က်ဆီ လက်ချက်မကင်း
ကြဘူး လို့သိရပါတယ် ။ ကျနော်တို့တွေဟာ မလိုအပ်ပဲ ဆီကို ဘယ်လောက်စားခဲ့ကြသလဲ ..?
မနက်မနက် ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ပဲပြုတ်ဆို ဆီလေးရွှဲမှ …….မုန့် ဟင်းခါးဆို အကြော်မပါရင် ခိုးလိုးခုလု၊
လက်ဘက်ရည်သောက်တော့လည်း ….ပဲပလာတာ ပဲအီကြာ ဆီလေးပိုထည့် ပါလို့ပြောချင်သေး….
လက်ဘက်သုပ်ကြတော့လည်း….ဆီမပါရင် ဘယ်လိုမှမဖြစ်…….ဒီလိုဆိုတော့ …ကိုယ့် ကို ကိုယ် သနားလို့
ရေလုံပြုတ်ပဲချက်စားမယ်ဆိုတော့လည်း…..အလုပ်ထဲက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေက “အကန်းမျက်ရည်” ဟင်း
လို့ ပြောချင်သေးရဲ့  ………….တကယ်တော့လည်း ဆီမပါရင်မစားနိုင်ပါဘူးလေ ….။
ဟိုး…..အရင်က မသိခဲ့စဉ်တုန်းက ဆီသန့် လို့ပြောရင်ယုံလိုက်တာပဲ ….။ ခုတော့…..နယ်ကပြန်လာပြီး
ကတည်းက တတ်နိုင်သမျှ စပ်စုပါတော့တယ် ….။ နယ်အပြန် စက်ထဲက ကိုယ်တိုင်ခံပြီးံယူလာတဲ့ ပဲဆီစစ်စစ်
လေးကလည်း နဲနဲပါလာတော့ အဲဒါလေး စံနမူနာယူပြီး ဒီကနာမည်ကျော် ပါကင်ပိတ် ဆီတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်
ကြည့် တာပေါ့  ……။ ကျနော်က ဓာတုဗေဒ ပညာရှင်လည်းမဟုတ် …..ဆယ်တန်းလောက်အထိသာ
ဓာတုဗေဒ သင်ဖူးတာ ..။ ဒီတော့ အရင့်  အရင်က အတွေ့ အကြုံတွေအတိုင်း စမ်းကြည့် ရတာပေါ့ ဗျာ ။
စံနစ်မကျပါဘူး …လုံးဝစံနစ်တကျမဟုတ်ပါဘူး ….၊ ဒါပေမဲ့  …..သံသယဖြစ်ဖွယ်လေးများ …..စဉ်းစားစရာ
လေးများ တော့ ရလာပါတယ် ….။. ဒီလိုပါ …..နယ်ကပဲဆီစစ်စစ်နဲ့ ချက်တဲ့ ဟင်းတွေကို ရေခဲသေတ္တာ ထဲ
ကိုထည့်  တဲ့  အခါ ခဲ သွားလေ့ မရှိပါဘူး ….။ (၀က်သားနှင့် တကွ ပြည့် ဝဆီထွက်တဲ့ အသားများမှတပါး )
အဲ …..စားအုံးဆီ အရောအနှော ပါတဲ့ ဆီနဲ့ဆိုရင် တစ်ညလောက်ထည့် လိုက် တာနဲ့ မနက်ဆိုရင် ရေခဲမုန့်
လိုခဲသွားပါပြီ…..ပုံမှန် အအေးခန်းထဲ ထည့် တာပါ ။
ဒီတခါတော့ ကျနော်သေခြာသွားအောင် ခွက်သေးသေးလေးတွေထဲမှာ စားအုန်းဆီတစ်ခွက် …၊ ပဲဆီ
စစ်စစ်တစ်ခွက် …၊ နောက်ပြီး ဈေးထဲက သေခြာပေါက်ရောပြီးသား ပဲဆီလို့ ပြောရောင်းနေတဲ့ ဆီတစ်ခွက်..၊
အဲ ……နောက်ပြီး …အာမခံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ပါကင်ပိတ်ပြီး စက်ရုံကြီးများမှ ထွက်ရှိတဲ့ …ဘာ..ပဲဆီသန့်  ….
ညာ….ပဲဆီသန့်  ဆိုတာတွေကိုလည်း နာမည်ကျော် တံဆိပ် သုံးမျိုးလောက်ကို ခွက်လေးတွေထဲထည့် ပြီး
တစ်ညလောက် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့် ကြည့် လိုက်ပါတယ် …..။ ဟုတ်ကဲ့  ….အံ့သြ စရာပါပဲ……
နယ်က စက်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ပဲဆီစစ်စစ်မှတစ်ပါး အားလုံး ခဲ သွား တာတွေ့ရပါတယ် …..။ ပလပ်စတစ်ဗူး
နဲ့ ပါကင်ပိတ်ဆီသန့်  ဆိုတာတွေကို ဖြူဖွေးနေတဲ့ ဆီအတုံး အခဲကြီးအဖြစ် မြင်ရတဲ့အခါမှာ ….ကျနော် တော်
တော်လေးကို စိတ်ပျက်သွားပါတော့တယ် …..ကျနော်တို့ ဘာကိုယုံရတော့မလဲ ….ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲ …
ဘယ်လောက် အကျိုးအမြတ် ရှိလို့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆီတစ်စက်နဲ့ လဲခဲ့ရတာလဲ……?
ကျနော် အကြမ်းဖျဉ်း ကလေးတွက် ဈေးတွက် တွက်ကြည့် မိပါတယ် …..။ ဆီလေးပိဿာမှာ သုံးပိဿာက
ဆီသန့် ဖြစ် ပြီး တစ်ပိဿာက စားအုံးဆီ ဆိုပါစို့ ……အရင်းက လက်လီဈေးနဲ့တွက်ရင် …….
ဆီသန့် သုံးပိဿာ ……………………၁၃၅၀၀
ပျမ်းမျှ တစ်ပိဿာအရင်း………………..၃၈၂၅..မှ ၃၉၀၀
ရောင်းဈေး …ဆီတစ်ဗူး ….ပါဝင်ဆီ ၉၅ ကျပ်သားခန့်  ……………….၄၅၀၀ ၀န်းကျင်
၉၅ ကျပ်သားပဲ ပါတဲ့အတွက် အရင်းက ၃၇၀၀ ခန့်  ….
ကဲ …….ကျနော်အကြမ်းအားဖြင့်  ကလေးတွက် တွက်လိုက်တာပါ ။ ပုံမှန် အမြတ်ငွေထက် ဆီတစ်ဗူး
ရောင်းပြီးတိုင်း ငွေ ၈၀၀ ကျပ် ပိုမြတ်နိုင်ပါတယ် …..။ ရန်ကုန်မြို့ က နာမည်ကျော် စက်ရုံကြီးတွေက
ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆီတွေဟာ နေ့ စဉ် ဘယ်လောက်ပမာဏရောင်းရမယ် ထင်ပါသလဲ ……..။
အကယ်၍များ လူဦးရေ သန်းချီရှိနေတဲ့  မြို့ ကြီးတစ်ခုတည်းမှာ ဆီသန့် ဗူး (၁၀၀၀) ရောင်းရတယ် ဆိုပါစို့ ..။
တစ်နေ့  …ပိုလျှံအမြတ်က (၈၀၀၀၀၀)ပါ ….။ တစ်လ ..သိန်းပေါင်း (၂၄၀) ကျပ် ။ ကဲ ပါလေ ……ဒီလောက်
မမြတ်ဘူးလို့ပဲ ထားလိုက်ပါ …..သေခြာပေါက်ကတော့ ဒီတစ်ဝက်ပိုမြတ်မှာပါ ပဲ ……။ ကျနော်သူတို့ ကြီးပွား
ချမ်းသာတာ မနာလို လို့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ယုံကြည်မှုကို ဖေါက်ဖျက်ခံရလို့ပါ …..။ ဒါကြောင့် လည်း ပဲဆီသန့်
ထုတ်လုပ်တဲ့ သူဌေး တစ်ဦးက အဆင့် မြင့်  ဆေးရုံကြီးတစ်ခုကို ၀ယ်လိုက်တယ်လို့ ကြားမိပါတယ် ….။
ကောင်းတာပေါ့ လေ ……အရောအနှောဆီလေးတွေစား…အသည်းအဆီဖုံး ..၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်တော့ သူတို့
ဖွင့် ထားတဲ့ ဆေးရုံကိုတက် ….။ မထူးပါဘူး…..နာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပါ ဆက်လုပ်ပါလား လို့ ပြောလိုက်
ချင်သေးရဲ့ ဗျာ .. …..။
ဒါတွေက ကျနော်အပါအ၀င် လူတွေနေ့စဉ် ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ ရှောင်လွှဲလို့ မရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ …..။ အစားအစာနဲ့
ဆေးဝါးတွေကိုစစ်ဆေး ကြီးကြပ်တဲ့အဖွဲ့ အနေနဲ့ ဒါမျိုးတွေကိုပါ စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ် …။ တန်ရာ တန်ကြေး
ရောင်းပါ …။ ပြောထားတဲ့ အရည်အသွေးမှီအောင်လုပ်ပါ …တစ်ဖက်ကလည်း မလိုအပ်တာချွေတာပြီး ပစ္စည်း
ကောင်း ကောင်းသုံးစေဖို့ လုံ့ဆော်ပါ ….။ ဒါဟာ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့  HR နဲ့ဆိုင်ပါတယ် …။ အခု ကျနော်နယ်ကို
သွားရင်းနဲ့ ဘာတွေ့ လာသလဲဆိုရင် …ဟိုးအရင်က ကျေးလက်နေ လူထုဟာ အ၀လွန်တဲ့သူ ရှားပါတယ် …။
ပုံမှန် ကျစ်ကျစ် လစ်လစ်နဲ့ အဆီပို တွေသိပ်မတွေ့ ရတတ်ပါဘူး ……။ ဘာအားကစားမှမလုပ်ပဲ ကြွက်သားတွေ
နဲ့ အားကျစရာပါ ..။ ဖိနပ်မပါပဲနဲ့လည်း နေပူစပ်ခါး သွားလာနိင်ပါတယ် …။ မြွေကိုက်ခံရတတ်တာကလွဲရင်
တော်ရုံ ကူးစက်ရောဂါတွေမရတတ်ပါဘူး ….။ ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ်ဆိုပါတော့ ….။
သူတို့ ဘာတွေစားကြလဲ ဆိုတော့ ……..အညာကလူတွေကတော့ ပဲမျိုးစုံအဓိကလို့ထင်ပါတယ် ….။
အောက်ပြည်ကလူတွေကတော့ မရှိမဖြစ် ငါးပိ ပါ ။.ပုံမှန် ငါးပိရည်လေးတစ်ခွက်အမြဲကျိုပြီး နီးစပ်ရာ
ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေပြုတ်လို့ ရိုးရှင်းစွာစားတတ်ကြတာပေါ့ …။ကြက်ဥ ၊ ဘဲဥ နဲ့  ကြက်သားကတော့
အိမ်အောက်မှာ ကြိုက်တာဆွဲချက်ရုံပဲလေ ..။ ၀က်သား ဆိုတာက အလှူ မင်္ဂလာဆောင်တွေကျမှ တစ်ဝ
ကြီးစားကြရတာပါ ။ ဒါကြောင့် ၀က်သားစားပုံကိုစာတစ်တန် ပေတစ်တန်တောင်မှ ဖွဲ့ ခဲ့ကြသေးတာပဲ ။
သူများစားတာတွေ့ ဖူးပါရဲ့ 
ဖန်ပြာခွက်နဲ့ ကျောက်စက်ရေ……..အမောပြေအောင်တိုက်ပါ မမ….” ဒါက သံချပ်ထိုးကြတာပါ ……..
“၀က်သားတုံးကြီး လက်သီးဆုပ်သဏ္ဍန်” တဲ့…..ဒါက ဒေါ်မြင့် မြင့် ခင်ရဲ့  “နပန်းဆံ”သီချင်းထဲက ၀က်သားပါ
တောရွာတွေမှာ အားပါးတစ်ရ ပြောတဲ့ အာလုပ်စကားကတော့ … “ ဘီးစပါတ်တုံးကြီးကို ..သွားဖုံးမြုတ်အောင်
တီးပစ်လိုက်မယ် ..” ၀က်သားတုံးရဲ့  အရွယ်ပမာဏကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့  ဘီးနဲ့ပါတ်ထားတဲ့ ဆံထုံး
အရွယ်နဲ့ နှိုင်းပြီး တင်စားထားတာပါ …..။ ဒီလို ဒီလို အာပါးတရ စားကြရတာကတော့ တစ်နှစ်နေမှ
လေး ငါး ခြောက်ကြိမ် …။ သုံးတဲ့ဆီကလည်း ပဲဆီ ၊နှမ်းဆီ ၊ နေကြာဆီ …
ခုတော့ …စားအုံးဆီ ယဉ်ကျေးမှုမှာ သူတို့လည်းစီးမျောနေပါပြီ …။ လူတွေလည်း ခတ်ဖိုင့် ဖိုင့် တွေဖြစ်လို့
ကျစ်လစ်တာတွေလည်း လျော့ ကျပြီး သူတို့ မကြားဖူးတဲ့  မြို့ ပေါ်ရောဂါတွေလည်း ရလာကြပြီပေါ့  ….။
တကယ်တော့ အစားအသောက် အဟာရဆိုတာ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအတွက် နေ့ စဉ် သုံးစွဲနေရတာ
ဆိုတော့ သမ မျှတပြီး အန္တရယ်ကင်းဖို့ကောင်းပါတယ် …။ တိုင်းပြည်တစ်ခု တောင့်တင်းခိုင်မာ ဖို့ဆိုရင်
ပြည်သူတွေလည်း ကျန်းမာ ဖို့ မလိုဘူးလား ….? ဒီလိုသာ လူတစ်စုကောင်းစားဖို့ ငဲ့ ညှာနေရင်တော့
ဆေးရုံတွေ ထပ်ဆောက်လို့တောင် လောက်မှာမဟုတ်ဘူး ….. ကျနော်တို့ရဲ့  အစိုးရမင်းများ စဉ်းစား
သင့် တဲ့ အချိန်လည်း ရောက်နေပါပြီ………. ။
…………ကဲ ကဲ ဒီတော့ .. ကျနော်တို့ အတွက် သူတို့အတွက် ဘာများဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဗျာ …..။
ကိုဆာမိရေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၊ တစ်ခါ က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတာလေး ရှိတယ်ဗျ
လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြတော့ ၊ အာလကေ မများသေးလို့ ၊ အခုချိန်ထိ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးဘူး
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ အရင်းအနှီးနဲ့ ဖြစ်စေ
အများနဲ့ (မြန်မာနိုင်ငံသား ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေချည်းပဲ ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့) ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်စေ
အမျိုးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုပြီး ၊ ပဲဝယ်တဲ့နေရာကအစ ၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းပိုင် ဆီစက် နဲ့ဆီထွက်လာတဲ့အထိကို ၂၄နာရီ လူကိုယ်တိုင် ၊ စီစီတီဗီများနဲ့ လဲ အပါအဝင် စစ်ဆေးပြီး မှ ဈေးကွက်ထဲကို ဖြန့် ဖို့ ပေါ့
အဲ… အဲဒီလို လုပ်မယ်ဆိုရင် ၊ ရောင်းမယ့် ဆီဈေး လက်ရှိ ဈေးကွက်ထဲက ဆီဈေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ နဲနဲများလိမ့်မယ်ဗျ
အဲဒီကွာခြားမှုကို ဘယ်လိုလျှော့မလဲ ဆိုတော့
အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ၊ စားသုံးမယ့်သူ ကျန်းမာရေးအတွက် လုံးဝ ၁၀၀% စိတ်ချရမှု….ဘယ်ဆီနဲ့ ယှဉ်ပြီး အအေးခန်း/ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထည့် ၊ ကိုယ့်ဆီက လုံးဝမခဲစေရဘူး ဆိုတာမျိုး ၊ နောက်ပြီး နိုင်ငံသားပိုင် ၊ ကိုယ့်ဘာသာဝင်ချင်းမို့အားပေးကြပါ ကိုယ်လို ဘာသာဝင်တွေ အားပေးကြပါ ဆိုတာမျိုး …
နိုင်ငံသားတွေကို ချစ်စိတ် ၊ အမျိုးဘာသာကို ချစ်စိတ်နဲ့ လုပ်ရမှာဆိုတော့
ကိုယ်လို စိတ်တူတဲ့လူတွေ ရှယ်ယာစုလုပ်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ .. ဈေးတန်းထဲမှာ နေရာရပြီးသား ၊ လူတွေနေ့ စဉ်သုံးနေတဲ့ ရောဆီတွေကို လိုက်ယှဉ်ဖိုက်ရမှာဆိုတော့
အဲဒါမျိုး လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကလဲ… သိန်းသောင်းကျော်လောက် ရှိမှာကလား
အခုတော့… ကိုဆာမိ ရေးတဲ့အတိုင်း ၊ အရောအနှောလေးတွေကိုပဲ ကြောင်ကြက်ရှိ ပြီး ၊ သင့်သလို ဖြစ်သလို ဆက်စားလိုက်ဦးမယ်ဗျို့ 
ကိုပေ အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ဗျာ ကျွန်တော် အရင်ဆုံး အားပေးမယ်
ကိုဆာမိ ရေ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ အရေးယူမှု အားနည်းတာကြောင့် ဆိုတာလဲ အချက်တစ်ခုပါ ၊ ဥပမာ “အရော” ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ဆီက မသန့်ပါဘူး သိရင် လူတွေကြားထဲ သတင်းပြန့်သွားရင် သူတို့ ကို ဘယ်လိုအရေးယူလဲ တော့ မသိဘူး သိပ်မကြာဘူး အဲဒီလူတွေဘဲ “အနှော ” ဆိုတဲ့ တံဆိပ်နဲ့ပြန်ထွက်လာပြန်ရော ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ
ပဲဆီစစ်စစ်ရဖို့ ဈေးဘယ်လောက်ပေးရပေးရ ၀ယ်စားချင်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် ရွှေထက်တောင် ရှားနေသလိုပဲ …
ဆီကို မစားပဲလဲမနေနိုင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးလျော့စားတဲ့နည်းကပဲ လတ်တလောမှာ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောနည်းပါပဲ ..
ကိုပေ ရဲ့ စိတ်ကူးက အလွန်ကောင်းပါတယ်ဗျာ …။ တကယ်တော့ … ကျယ်ပြန့် တဲ့ အသိပညာပေး
တွေနဲ့ဆိုရင် ဈေးထက် အရည်အသွေးကို ပိုပြီးအလေးသာလာမယ်ထင်ပါတယ် ။
အချိန်တော့  နဲနဲ ယူရမှာပေါ့ နော် ။ တဖက်ကလည်း အ၇ည်အသွေးစစ်ဆေးမှုတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်
လုပ်ပေးရင်း ဈေးကွက်တွင်း မသမာမှုတွေကို ထိန်းချုပ်၇လိမ့်မယ်ထင်တယ် ။
တကယ်လုပ်နိုင်ရင် တကယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဈေးက ပိုပြီး ကွာမှာမှမဟုတ်ပဲ ။ ခုဟာက တကယ့်  ပဲဆီကို
ကြိတ်ပြီးရောင်းရင် ကျသင့်တဲ့ဈေးယူထားပြီးသားပါ ။
ခုကစပြီး တစ်ယောက်ကနှစ်ယောက် ….နှစ်ယောက်က နေ လေးယောက် စပြီး လက်တို့ကြစို့နော …..။
အစ်ကိုပြောတာ အဟုတ်ပါဗျာ ….။ အဲဒီဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို နေရာတကာမှာ အသက်ဝင်အောင်
လုပ်ကြရမမှာပဲဗျ ….။ နိုင်ငံ တကာရဲ့  အရေးယူမှုပုံစံတွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ယဉ်ပါးအောင်
လုပ်ပြီး အစိုးရပိုင်းကိုက တကယ်လုပ်ပြသင့် တာပေါ့  ။ ခက်တာက ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့  ဥပဒေရေးရာ
ပိုင်းမှာ အားနည်းချက်တွေက ရှိနေသေးတော့ ….တစ်နေ့တော့ ဖြစ်လာမှာပါလို့ မျှော်လင့် ရတာပါပဲ ။
ကျနော်တို့ မမှီနိုင်ရင်တောင် နောက်မျိုးဆက်ပေါ့ လေ ……
မဝေေ၀ ရေ …..
မဝေပြောသလို လက်ရှိလည်း လျော့စားလျက်ပါ ။ခက်တာက အကြောင်းကြောင်းကြောင့်  အပြင်မှာ
၀ယ်စားရ ရင်တော့  ရှောင်မရဘူးဗျို့  ….။ တစ်နည်းတော့ ရှိပါတယ် …နယ်က ဆီစက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးရင်
မြေပဲကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီး ကိုယ်တိုင်စောင့် ကြည့် ပြီးကြိတ်၇င်တော့ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ် ….
တစ်နှစ်စာတော့ လှောင်ရမှာပေါ့ နော် ….
တစ်နေ့  ….. အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းဆန့် ကျင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ အရည်အသွေးပြည့် မှီတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးတွေ
တန်ရာတန်ကြေးနဲ့ ရလာမယ် ထင်တာပါပဲဗျာ…။
ထပ်တိုး ဗဟုသုတလေးပါ ။ ဒီ Page တွေကတော့ ဒီလိုပြောကြတယ် ။ Best Cooking Oils are =
1. Extra-Virgin Olive Oil ။
1. Hazelnut Oil / 2. Olive Oil / 3. Flaxseed Oil / 4. Avocado Oil / 5. Salmon Oil
1. Macadamien Oil / 2. Olive Oil / 3. Canola Oil / 4. Peanut Oil / 5. Rice Bran Oil
1. Olive Oil / 2. Canola Oil / 3. Rice bran Oil / 4. Coconut Oil / 5. Flaxseed Oil
1. Canola Oil / 2. Walnut Oil / 3. Flaxseed Oil / 4. Olive Oil / 5. Almond Oil
အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး စားသုံးဆီတွေဟာ ၊
1. Extra-Virgin Olive Oil / 2. Canola Oil ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ် ။
မြေပဲဆီဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး စားသုံးဆီထဲမှာ မပါပါဘူး ။
“ bad ” oils ( မစားသင့်သော ဆီတွေပါ )
– Hard margarine
– Palm kernel oil ( မြန်မာပြည်မှာစားနေတဲ့ စားအုန်းဆီပါ )
ရွာသူားတို့ရေ Sorry ပါ ၊ အမှန်ကတော့ ။
အဘ ရေးတဲ့ ဆီစာရင်း တစ်ခုတိုင်းရဲ့ ဘေးမှာ ၊
ကိုးကားတဲ့ Web Page တွေ ပါပါတယ်ကွယ် ။
အဲဒါတွေကို သူကြီးရဲ့ Anti Virus & Anti Spam ware က ၊
ဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ် ထင်တယ် ။
အခုတော့ ဘာမှပါမလာတော့ဘူး ။
သံလွင်ဆီရဲ့  ဈေးနှုံးက မြန်မာပြည်အတွက် အိမ်မက်ပါပဲ ။တစ်လီတာက်ု နှစ်သောင်း
နီးပါးဆိုတော့မိသားစုသုံးယောက်ရှိတဲ့ အိမ်ဆို တစ်လ ခြောက်လီတာလောက်
သုံးရပါတယ် ။ ဆီဖိုးသီးသန် ၁၂၀၀၀၀ နီးပါးသုံးနိုင်ဖို့ အတွက် ဝင်ငွေဆယ်သိန်း
ကျော်လောက်မှ အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်တယ် ။ အဲဒီမှာစတွေ့ တာပဲအဘရေ…
ပဲ ၊ နှမ်းနဲ့  နေကြာ ဆီတွေကတော့ ပြည်တွင်းမှာထုပ်လုပ်နိုင်လို့ဈေးအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်
လောက်ပါတယ် ။ဒါတောင် အခုနေကြာမစိုက်ကြတော့ ဘူး ပဲတီစိမ်းနဲ့  မတ်ပဲ က
ဈေးကွက်ပိုဝင်ပြီး ပိုရနိုင်လို့ ပြောင်ပြီးစိုက်လာကြတယ်လေ ။
တပြည်လုံးအတွက်ဆို စိုက်ပျိုါ်တာကို လေးဆလောက်လုပ်ယူရလိမ့် မယ်
မလိုအပ်ပဲ ဆီသုံးကြမ်းကြတာကိုလည်း လျော့ ရမယ်ထင်တယ်
အစ်မပြောသလို အစိုးရကဥပဒေရေးရာနဲ့ ထိမ်းချုပ်ပြီးတကယ်အရေးယူရမှာပါ
ခက်တာက အရင်အတိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတာပဲ …….
စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှူထိန်းသိမ်းပြီးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ဘို့ လိုအပ်လှပါတယ်။
ဆီအစားကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့၊ ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပရောက် မြန်တွေလည်း ထိုနည်းတူစွာ။ အိမ်မှာတော့ ဘယ်လိုစားကြလည်း မသိဘူး၊ အလှူပွဲတွေ ဘုန်းကြီးပွဲတွေမှာ ကြည့်လိုက်ရင် ဆီတွေမှ နှမ်းခြင်းပဲ။ စားအုံးဆီမဟုတ်လို့ ရောဂါမရနိုင် ဆိုပြီးများ နင်းကန်ထည့်ကြလေသလား မပြောတတ်ဘူး။ အချိုမှုန့်လည်း ထည့်သဗျ။ ဒါကတော့ မြန်မာမှ မဟုတ်ဘူး၊ တရုတ်ဆိုင်တွေ သွားစားမိရင် ညဖက်သောက်ပေတော့ရေ တဂွတ်ဂွတ်နဲ့။ ကိုရီးယားဆိုင်တွေလည်း သုံးတယ်ပြောသံကြားတယ်။ ဒီတော့ စပန်းနစ်ရ်ှပဲဆိုင်တွေလည်း သုံးမှာပဲ။ အချိုမှုန့်တော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်၊ ဘာတဲ့ ခနောကြက်သားမှုန့် ဆိုလားပဲ။ သေချာလည်း စာဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။ ဘာနဲ့ ကြက်သားမှုန့်ထားသလဲလို့.. MSG ဆိုတာ ပြူးနေအောင် ရေးထားသဗျ။ ပြောလည်းပြောပြောပဲ.. ဒီလောက်ကြပ်တည်းနေတာတောင် ဆီဘုံးဘလအော သုံးနေသေးရင် သမဒဂျီး တန်ခိုးနဲ့ ဝင်ငွေလေးဆတိုးရင် ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ချမ်းသာလာရင် အပေါစား စားအုံးဆီနေရာ ဆီကောင်းဆီသန့်များ နေရာဝင်ယူလို့ နည်းနည်းပိုသက်သာလာမယ် ထင်တာပဲ။ ရောဂါတကယ် မဖြစ်စေချင်ရင်တော့ လူနေမှုစတိုင် အစားအသောက်ပုံစံ ပြောင်းမှပဲရမယ်။ ဒီတော့ လူလား မူလား ကြိုက်ရာရွေးပါ။
ကျမ သားက ဆီကြော်တွေ အရမ်း စားတော့ အိမ်မှာ အမြဲ ကြော် ပေး ရပါတယ်။ ဒီ မှာတော့ ဆီအသန့် တွေ ပေါ တော့ ပြသနာ မရှိ ပေမဲ့ ကိုယ့် နိုင် ငံ ပြန်နေ တဲ့ အချိန် ကျ ရင် ဘယ် လို ဆီ များ သုံး ရ ပါ့ မလဲ လို့ မကြာခဏ ပြောမိကြတယ်။
ငွေရှာရခက်လာတဲ့အချိန်မှာ ငွေနဲ့ရောဂါ လဲနေကြတာတွေလည်း များပါတယ်…
ကျန်းမာရေးကို ငွေထက်ပိုတန်ဖိုးထားပြန်တော့လည်း ၀ိသမလောဘသားတွေကို ရှောင်လို့မရပြန်ဘူး…
မွန်မွန်လည်း ဆီနဲ့အချိုမှုန့်ကို တော်တော်ကြောက်ပါတယ်…
ဆီကတော့ တတ်နိုင်သမျှလျှော့စားရုံကလွဲပြီး ဘာမှလုပ်လို့မရသေးပါဘူး… အချိုမှုန့်တော့ လုံးဝမသုံးဘဲ ခနောပြောင်းသုံးနေပါတယ်..ခနောကိုလည်း စိတ်မချလို့ မရဲတရဲသုံးနေရတုန်းပါပဲ…အိမ်က အမေဆို လုံးဝပြောလုိ့မရဘူး..တစ်သက်လုံးသုံးလာတာ သေခါမှသေရောတဲ့…
ဦးပေပြောတဲ့လုပ်ငန်းကို လုံးဝထောက်ခံပါတယ်… အများပိုင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်လေး စလုပ်လို့ရရင် ကောင်းမယ်နော်…
မန့် လို့ ပြီးသေးဘူး တတ်သွား ပြီး ။ဆက်ပြောလိုက်အုံးမယ်။
ဒီက ဆေး ရုံ မှာ ဆေးစစ် တော့ ဆရာဝန်က တတ်နိုင်ရင် သံလွင်ဆီ သုံး ၊ မတတ်နိုင်ရင် Canola Oil သုံးခိုင်းတယ်။ Canola Oil သုံးကြည့် တော့ တော်တော် ကောင်းတယ်၊ မြေပဲ ဆီလောက် မပျစ်ဘူး။ခပ်ကြဲကြဲ ပဲ။ အိမ်မှာ အဲဒါပဲ သုံး ဖြစ်တော့ တယ်။ ၂လီတာ ( ၁ ပိသာနီးပါး) တစ်ဘူး မှ ၆ ဒေါ် လာ(၄၀၀၀ကျပ် ) ၀န်း ကျင်ပဲ ပေးရတယ်။ မြန်မာပြည် စူပါမားကတ်တွေ မှာ တွေ့ ဖူး ပေမယ့် ဈေး ကြီး တာ သတိထားမိတယ်။ စင်ကာပူ မှာတောင် အဲလောက်နဲ့ ရောင်း နိုင်တာ
မြန်မာ ပြည်မှာ ဘာလို့ မရောင်း နိုင် ရ တာလဲ။ ပြည်ပ ကနေ အဲလို ဆီအကောင်းတွေ ကို အများတတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနဲ့ သွင်း နိုင်ရင်၊ အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်လာရင် ပြည်တွင်း က အရောအနှော နဲ့ ရောင်းတဲ့ သူတွေ လည်း ဆင်ခြင်သွားမယ်။ ဆီ ညံ့ တွေ လည်း ဘယ်သူမှ သုံး မှာမဟုတ်တော့ ဘူး ဘူး။
ဒါပေမယ့် သွင်းခွင့် ရတဲ့ သူတွေ က အကောင်း မသွင်း ကြတာ က ဆိုးတယ်။
ကျနော် ခရီးထွက်သွားခဲ့  ရလို့ Reply မလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ ။ဆွေးနွေး ပေးသွားကြတဲ့  ရွာသူားအားလုံးနဲ့
တစ်ကွ ဖတ်ရှုသူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် …..။
ပြည်ပမြန်မာများ ဆီသုံးကြမ်းတာကိုသိရတာတော့ အံ့ သြမိတယ် ။ စားသောက်တဲ့ ပုံစံပြောင်းသွားပြီလို့ 
ထင်နေတာ …။ ကျနော်တို့တောင် ကျိုးစားပြီးပြောင်းနေသေးတာ ….။
အခုချိန်မှာ နဲနဲ ၀ လာပြီဆိုရင် အသည်းအဆီဖုံးဖို့  တော်တော်လေး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလာပါပြီ ..။
မမိုချိုပြောတဲ့  ဈေးက ပဲဆီဈေးလောက်တောင်မရှိဘူးနော် ။ (၂)လီတာကို (၆၀၀၀) ကျပ်ဆိုရင်တောင်
ပဲဆီဈေးလောက်မို့ စားပျော်ပါတယ် …..။ တစ်ခုပဲ …ကျနော်တို့ လူတွေက ပဲနံ့ လေးတသင်းသင်းမှ
ခနော နဲ့ အချိုမှုန့် က သိပ်မထူးလောက်ဘူးနော …။ အမှုန့် ကိုလျှာနဲ့ လျက်ကြည့်  ….။
လျှာထဲမှာ အရသာစွဲနေပြီး ရေငတ်တာလည်း ပုံစံတူပဲဗျ …။
အစ်ကိုရေ …လျော့ စားတယ်ဗျ ….သို့သော်လည်း အပြင်မှာ ၀ယ်စားနေရတာကလည်းရှိပြန်တော့
ရှောင်မရဘူးဖြစ်နေတယ် …။ အပေါ်က ဦးကြောင်ပြောသလိုပဲ စားပြီးရေငတ်ရတာနဲ့  …လည်ချောင်းထဲ
ခတ်အစ်အစ် ဖြစ်ရတာနဲ့  …. ဒီလိုနဲ့ ပဲ အသက်တိုမယ်ထင်ပါ့ ဗျာ …..။
ဆီကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီး
တင်ပြထားတာ ကောင်းပါတယ် ကိုဆာမိရေ…
အိမ်မှာလည်း ပဲဆီသန့်ဆိုတဲ့ ပုလင်းတွေပဲသုံးနေတာ..
ဟင်းကျန်လို့ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားလိုက်ရင်တော့
အင်း။ ကိုဆာမိစာဖတ်ပြီး ဆီကြော်သိပ်ကြိုက်သော ကိုယ် အတော်စိတ်ဓာတ်ကျသွားပါတယ်။ ကိုကြီးမိုက်ပြောသလို လျှော့စားရုံပါ့။ ဒါမှ မရသေးလည်း ရေလုံပြုတ်လေး ပြုတ်စားမှပဲ။
ပြုတ်စားစရာ ရေတွေကိုက မသန့်တော့တဲ့ အချိန်ရောက်တော့လည်း၊………………………….
မျှစ်ကိုအရောင်ဆိုးတာ နွားနို့ကိုဖော်မလင်ထည့်တာ ငါးခြောက်ကို ယမ်းစိမ်းဖျန်းတာ
တနေ့တခြားများများလာတယ်ဆီတွေမသန့် တဲ့အကြောင်းပြောချင်နေတာကြာပါပြီ အခုကိုဆာမိကပြောပေးတော့ အတော်ဖြစ်သွားတယ် အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့စစ်ဆေးအရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းလာဖို့တာ
မရှိပါဘူး ။ ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲက ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းအများကြီးသက်
ရောက်ပါတယ် ။ အန္တရာယ်ရှိမှန်းသိသိကြီးနဲ့ ခဏတာသက်သာပြေလည်ဖို့အရေး
အညာကလူတွေ ဆီကြိုက်တာတော့ ယုံသဗျာ ….။ ဟိုမှာလည်း အမျိုးတွေ၇ှိသမို့ သူတို့ဆီသွားရင်
ဆီရွှဲရွှဲ ဟင်းတွေချည့် ပဲ …..တစ်ခြားမကြည့် နဲ့ နာမည်ကျော် စိုးစိုး မုန့်တီဆိုရင် ဆီလျော့  ထည့် 
လို့ ပြောမှ မရပဲ ..။
ကျနော်တို့ အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာကတော့ သက်ဆိုင်ရာက အာရုံစိုက်ပြိး ဥပဒေနဲ့  အရေးယူနိုင်ဖို့
ခုလို ဆော်သြခြင်းပါပဲ …။ မကြာခဏအသံပေးရင်တော့ တစ်နေ့  ထူးခြားလာမှာပါ …။
ဖတ်ဖူးတယ် ….။ စောစောကပြောသလိုပဲ မကြာခဏ အသံပေးနေရတာ ….
နဲနဲလည်း စိတ်ပျက်လာလို့ …။ ခုတော့ လျော့စား နေရတာပေါ့ လေ ….
တေဂျင်ဒေးဝူးးးး ….ဟဲ ဟဲ …
ဒေသတွင်း ပျမ်းမျှ အသက်အတိုဆုံး တိုင်းပြည်
အဲ့အကြောင်းတွေ မောင်ဂီ့ ရေးဖူးတယ်ဗျ..
မှတ်မှတ်ရရ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဆဲစာလေးနဲ့တကွ..
ဘာမှတော့ ပေါချင်ပါဝူးဗျာ…တခုပဲ ….
လူ့ဘွ ဆိုတာ ဒုက္ခတွေချည်းပဲတဲ့ …သေတော့လည်း
အပေါ်က မဇာဂျီး ဆိုလည်း ……ခုလောက်ဆို …
ကျနော့ ဦးလေး တစ်ယောက်နဲ့အဲဒီအကြောင်း ဟိုးတော်တော်စောစောကတည်းက
မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားအရ မြေပဲဆီသန့်သန့်လောက်စားရရင်ကို မဆိုးပါဘူး။
အဲဒီလို ဆီစက်ဘာညာ ဦးလေးနဲ့ပြောကြည့်တော့ မင်းဘယ်လောက်လုပ်လုပ်
လက်လီ၊လက်ကားသမားက ရောတာဘဲ ဆိုတဲ့ ယနေ့ ကိုဆာမိရဲ့ ဒီစာလေးရဲ့သဘောကို
ကိုယ့်စက်နဲ့ကိုဆီထုတ်၊ ကိုယ့်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်ရောင်းရင်တောင်၊ “ဈေး”သက်သာတာဘဲကြည့်ပြီး
(ဝယ်ကိုမဝယ်နိုင်လို့ရယ်၊ နှမြောလို့ရယ်၊ နောက်ခါလာနောင်ခါဈေးဘဲ လို့စဉ်းစားလို့ရယ်)
ရှိပြီးသား ဆိုင်တွေ၊ဆီတွေကို ဖောက်ထွက်ရောင်းဖို့ခက်မယ်တဲ့။
“ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ (တကဲ့ကိုညီညီညွတ်ညွတ်နော်) လုပ်မှ ၁ နှစ် တန်သည်၊၂ နှစ်တန်သည်မှာတော့
တကယ်တမ်းဆီစက်ဆိုတာလည်း တနှစ်ပါတ်လုံး လည်ချင်ရင် အထက်အောက်မြန်မာပြည်မှာ
မျိုးမြေပဲတောင် မြေပဲသမားခြင်းအတူတူ အညာကအကြေဘက်ကိုရောင်းတာဆိုတော့။
လက်လီဆိုင်တွေကို အချိန်မရွေး ဝင်စစ်ဆေးမယ်။
ဒါမှမဟုတ် လက်လီလဲရောင်းဘို့မပေးဘဲ ကိုယ့်ကားတွေနဲ့ကိုယ်လိုက်ရောင်း။
အဲဒီကားကတော့ စိတ်ချရသူတွေဘဲ လုပ်။
စားသုံးသူက ခု “ကိုဆာမိလို” လည်လည်ပါတ်ပါတ်သဘောပေါက်သွားပြီ
ပြီးတော့ လူအများကြီးလည်း တော်တော်ညီညွတ်မှရမှာ။
မဖြစ်မချင်းလုပ်ရမှာဆိုတော့ ရှုံးမှာ ၁ နှစ်လောက်တော့။
လက်လီ လက်ကား ကလဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မလုပ်နိုင်သေး။
စားသုံးသူကလည်း သေကာမှသေရော ဈေးပေါတာဘဲ ဝယ်စားမယ် ဆိုတော့
အဲဒီကာလတွေကတော့ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးမှာပါ။
နာရေးကူညီမှုအသင်းလို၊ ခု ဖောင်ဒေးရှင်းတွေလို ထင်ထင်ရှားရှား ကူညီနေတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်လိုမျိုး
စဉ်းစားပေးလိုက်ရင် ဒါလဲ “ဆီနဲ့သင့်ကျန်းမာရေး” ဖောင်ဒေးရှင်း (ကိုယ့်စိတ်ထဲကမှတ်ရမှာပါ၊
အဲဒီလိုကြီး တကယ်ဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့) ပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အများကြီး ကုသိုလ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဆေးဝါးအလှူဆိုတာ နေမကောင်းမှ လှူတာ။
ဒီအလှူက မနာခင် ၊ မနာအောင် (နေမကောင်းမဖြစ်အောင်) လှူတာပေါ့။
ဘယ်လိုလဲ။ရှုံးမဲ့ စီးပွါးရေး မလုပ်ချင်ကြဘူးလား။
မင်္ဂလာပါ ဆရာသစ်ရေ ….
ခုလို အားဖြည့် ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ ….။ ကျနော် အရေးပေါ်ခရီးထွက်ခဲ့ရလို့ Reply ပြန်မလုပ်
အစ်ကိုပြောတဲ့ အစီအစဉ်က ထင်သလောက် မရှုံးနိုင်လောက်ပါဘူး ….ကျနော့်  မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ
ှဆီစက်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေရှိတယ် …။ သူတို့ပြောသလို ဆိုရင် ပုံမှန်ထက်အမြတ်နဲမယ် ….
ဒါပေမဲ့ …. အင်နဲ့ အားနဲ့  လုပ်နိုင်လာတဲ့နေ့မှာ ပါးပါးနဲ့ များများရမှာပဲလေ ….။ ခက်တာက ကုန်ကြမ်း ပဲ ….
မြေပဲကို ဒီထက် လေးဆလောက် တိုးစိုက်မှရနိုင်မှာ ….။ အခုတောင်သူတွေက ပုံမှန်မြတ်တဲ့  မြေပဲထက်
မတ်ပဲကိုပိုအားသန်ကြတယ်လေ …. မတ်ပဲ က အတက်အကျကြမ်းတယ်လေ …။
အကယ်၍များ ဇီဝိတဒါနသဘောမျိုး အစ်ကိုတစ်ကယ်လုပ်ရင် ကျနော်ပါပြီးသားဗျာ ….။
စာရင်းသာ တို့ထားလိုက် ….။
ဖြန့်ဖြူးတဲ့ အခါ ကုန်ထမ်း ပါရစေ ဗျို့  …။ အကျိုးအကြောင်း သိရအောင်လို့ပါ …။
ကိုပေစိတ်ကူးသလို ကိုသစ်ချပြသလို ကိုပိုင်ဆီစက်နဲ့ ကြိတ်၊ဖြန့် လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုပိုင် ဘရန်းနိမ်းလိုမယ်နော်။
နံမယ်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေ တံဆိပ်ကပ်သလို ရွှေ ငွေ ပတ္တမြား ဘာညာ ဘာညာ တံဆိပ်တွေ ကပ်ပီး
ကိုပိုင် ပါကင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဖြန့်ရင် မဆိုးဝူး။
အိမ်ကတော့ ခု နယ်ဘက်က ဆီစက်ကနေ မှာစားနေတယ် ။
သူတို့ စက်က ထွက်တာကို ဗူးနဲ့ပါကင်နဲ့ ကျကျနနထုပ်ပိုးရောင်းတဲ့ ဆီကို ပေပါလိုက်ပို့တာပါ။ ဟိုရောက်မှာ ဘာတွေ ရောသလဲတော့ ကျမလည်း မသိဘူး။
သူတို့ဆီက ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ရင် မခဲဘူး။ ကြော်ရင် ချက်ရင်လည်း ထည့်တဲ့အခါ ပဲဆီနံ့ မွှေးပါတယ်။ ပြောင်းသုံးတာ ၄ နှစ် ၅ နှစ်လောက်တော့ ရှိပြီ ။ ဟိုကြား ဒီကြားနဲ့ ဒီက ဆီများ စားရတာ စိတ်မသန့်တော့လို့ ။
တခါတခါကျတော့လည်း ကိုဆာမိရယ် ကျမတို့က မရှိတာထက် မသိတာက ခက်နေတော့ မခက်ပေဘူးလား ။
ကြော်ငြာရင် ဘာမှပူစရာမလိုဘူးလေ …. ရွာသူားသားတွေကို အားကိုးရမှာပေါ့  …။
ရွာထဲမှာ ဒီဇိုင်းဆရာတွေလည်း ရှိပြီးသားဆိုတော့ ….တစ်ကယ်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုတာပါ ….။
အဲသလို မှာသုံးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဗျာ ..။ သို့သော်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်လောက်သာ
ကျနော်ဆို အိမ်တစ်ဝက် ဆိုင်တစ်ဝက်စားနေရတော့ တစ်ခါတစ်ခါ အတော်လေး စိတ်ပျက်မိတယ် ။
ရှောင်လို့လည်းမရ … မစားပဲလည်း မဖြစ် … သိသော်လည်း ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ ခက်ပြန်ရော ….။
ဆက်ဆက်ရေ ….ကျုပ်လည်း မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူးဗျာ …. အသံပေးတာပါ ။
တစ်နေ့  ကောင်းလာနိုးပေါ့  ။။။။
လာအားပေးတာ ကျေးကျေး …
ဒီ ပိုစ့်ကို..နေ့ လည် ကတည်းက… ဖတ်ပြိးပါပြီ ။
ရွာထဲကို ၀င်မရလို့( ဟန်းဆက်သေးသေးလေးနဲ့ဝင်လို့ ကိုမရလို့)
အခု…ဘာ ၀င်ပြောရမှန်းလည်း..မတိတော့ ၀ူး..
(ကျနော်က ပြဿနာတွေကို… စာပဲ..စီ တတ်တာ..
/မဖြေရှင်းတတ်တဲ့ လူစား )
ဒီ စာကို ဖတ်အပြီးမှာ…
လေးလေး..စာ မိ ( ဆာမိ ) ရေ….
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် မြေပဲ ၀ယ်လာပြီး ကြိတ်ခ ယူပြီး ကြိတ်ပေးတဲ့ ဆီစက် (အသေးစား) လုပ်ငန်း လေးတွေ ရှိပါကြောင်း ….
အဲဒီမြေပဲဝယ် ..ပြီးတော့သွားစောင့် ပြီးကြိတ် …တစ်နှစ်စာလှောင်ထား ….
အင်းးးးး ရန်ကုန်တိုက်ခန်း ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ဆို ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီး လူတွေအပြင်ထွက်နေ၇လိမ့် မယ်
ထင်တယ်ဗျို့  ……။
​မောင်​အံ(အံစာတုန်း) မှ အခုအချိန်မှာ အညာပဲဆီစစ်များ မှာယူရောင်းချပေးနေပါပြီ လို့ သတင်းပေးပါတယ်ဗျို့ ။
ကျနော်လည်း မြည်းစမ်းကြည့်ပြီးဖြစ်လို့ အာမခံပါတယ်
ကိုယ်တိုင်ကြိတ်ပြီး ပို့ပေးတာပါတဲ့ဗျို့ ။
ဖွဘုတ်ဂလုမှာ အပြည့်အစုံ ကျိဘာလို့ …
အဟိ… ဂဇက်က Community ကျယ်လာပြီ ၊ အလုပ်ဖြစ်မှာပါ မောင်အံရဲ့…
ဦးကျောက်စ်လို ညိုချောကြီးတောင် ဂဇက် ရောက်မှ အိမ်ထောင်ကျသေးတာ…
မောင်ရင်လည်း ရည်းစားရပြီးပြီဆိုတော့ ၊ စီးပွါးလည်းဖြစ်မှာပါလို့… အားဟိ